MUQDISHO: Madaxweynaha Soomaaliya oo waraaqihii aqoonsiga ka gudoomay Safiirka Cusub ee Dalka Japan.
February 21, 2013 2:20 pm GMT - Written by Mukhtar - Edited by Mukhtar
Muqdisho: (pp)- Madaxweynaha Dawlada Federalka ah Ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta waraaqihiisii aqoonsiga ka gudoomay Safiirka Dalka Japan u fadhin Doona Dalka Soomaaliya Toshihisa Takata , Madaxweynaha ayaa Danjiraha ay Japan usoo dirsatay Dalka Soomaaliya la qaatay kulan uu kaga gudoomay waraaqihiisii aqoonsiga danjirenimo.
Madaxweynaha oo waraaqihii aqoonsiga ka gudoomay, Safiirka Japan.
Kulanka Madaxweynaha iyo Safiirka Cusub ee Japan oo ahaa mid ay Saxaafadu banaanka ka joogety ayaa markuu soo idlaaday waxaa Saxaafada la hadlay Safiirka Dalka Japan Mr Takata wuxuuna muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay inuu noqdo wakiilka Dalka Japan u fadhin doona Dalka Soomaaliya wuxuuna tilmaamay 22-sano kadib inuu noqday Safiirkii ugu horeeyey ee ay Dawladiisu usoo Magacawdo Dalka Soomaaliya.
Mr Takata ayaa sheegay inay Safaarada Japan wixii maanta ka dambeeya ay si rasmi ah uga shaqayn doonto Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya isagoo tilmaamay inay doorkooda ka qaadan doonaan Dib u dhiska Dalka Soomaaliya oo ay colaado sokeeye ragaadiyeen, wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dib usoo kabashada ka muuqata Dalka Soomaaliya, Takata ayaa sheegay inuu Salaan uu uga sidey Raisul Wasaaraha Japan uu gaarsiiyey Madaxweynaha Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya.
Tan iyo Markii Kooxda Al-shabaab laga saaray Magaalada Muqdisho waxaa soo badanaayey wadamada danaynaaya inay Safaaradahoodii dib uga furtaan Dalka Soomaaliya, Waxaana la sheegayaa Dalalka iminka Safiirada usoo Magacawday Dalka Soomaaliya inay gaaraayaan 22-Dal, Waxaana arinkan si niyad sami ah usoo dhaweeyey umadda Soomaaliyeed.